Qaababka Barashada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Barashada wakhti kasta, meel kasta
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu bedelay habka aan iskuulka u sameysano. Ardaydu kuma wada jiraan fasalka isku waqti, halkii, waxay ka baranayaan meelo kala duwan oo kala duwan. Marka waa inaan baddalno habka aan u bixinno waxbaridda iyadoo lagu saleynayo waxa ugu nabdoon shaqaalaheenna iyo ardayda.
Sannadkan ardaydeenu waxay kula kulmi karaan shaqsi ahaan waqti buuxa ama qaab isku dhafan ama waxaan u baahan karnaa inaan u kaxeyno DHAMMAAN ardayda inay ka fogaadaan waxbarashada - iyadoo kuxiran sida ay ugu badantahay bulshada COVID-19. Hadday wax ku baranayso shaqsi ahaan ama gurigeyga - dhammaan tilmaamta sannadkan waxaa lagu horumarin doonaa qaab khadka tooska ah si aan awood ugu yeelano inaan uga jawaabno duruufaha isbeddelaya oo aan si dhaqso leh ugu dhaqaaqno moodooyinka.
Raadinta joogteynta? Waxaan sidoo kale siineynaa 100% ikhtiyaarka Barashada tooska ah ee qoys kasta oo raba inuu doorto waqti buuxa oo ah qaabka barashada guriga. Qoysasku waxay codsan karaan inay u guuraan 100% Barashada tooska ah waqti kasta iyaga oo la xiriiraya maamulahooda.
Ku noqoshada Dugsiga Sare ee Secondary Plan
Waqti buuxa, qof ahaan
Ardaydu waxay xaadiraan iskuulka waqti buuxa oo ay si shakhsi ahaan ah wax ula bartaan asxaabtooda fasalka iyo macallimiinta.
Dugsiyadu waxay raaci doonaan dhammaan hab-maamuuska nabadgelyada iyo tilmaamaha ku saabsan wejiga daboolashada iyo nadiifinta iyo fayadhowrka.
Munaasabado waaweyn ama shirar lama qaban doono waxna laga beddeli karo maalinta dugsiga si loo xadido tirada ardayda hal aag markiiba, sida qadada, fasaxa, waqtiyada shaqada laga eryo, iwm.
Jadwalka A / B / A / B / C
Waxay noo ogolaaneysaa inaan iskuulka ku dhigno arday macalimiin iyo asxaab isku fasal ah sida ugu macquulsan iyadoo la xadidayo tirada dadka dhismaha ku jira hal mar.
Ardaydu waxay xaadiraan dugsiga 2 maalmood ee usbuuca waxayna wax ku bartaan guriga saddexda maalmood ee kale ka dib jadwalka A / B / A / B / C ee is beddelaya.
Ardayda ku jirta "Group A" waxay aadi doonaan dugsiga Isniinta iyo Arbacada halka "Group B" ay wax ku baranayaan guriga, ka dibna waxay u wareegi doonaan Talaadada iyo Khamiista. Maalmaha “C” waxay noqon doonaan maalin barasho fog
ardayda oo dhan si dhismooyinka loo nadiifin karo, macallimiintuna ay xiriir shaqsiyeed ula sameyn karaan ardayda isla markaana ay ula shaqeyn karaan kulleejyada.
● Dugsiyadu waxay raaci doonaan dhamaan borotokoollada nabadgeliyada iyo tilmaamaha lagu daboolayo wajiga, fogeynta jirka, iyo nadiifinta iyo nadaafadda, waxayna ku shaqeyn doonaan ku dhowaad 50% awoodda iskuulka iyo basaska
● Mudnaanta waxay ahaan doontaa in jadwal loo sameeyo qoysaska isla maalmo isku mid ah
Waqti buuxa, barashada guriga
Marka aysan amaan aheyn in ardayda loo xaadiro iskuulka shaqsi ahaan, waxaan u wareejineynaa garaacida Distance Learning. Barashada masaafada, ardaydu waxay wax ku baran doonaan guryahooda iskudhaf ah isdhexgal toos ah iyo shaqooyin madax banaan.
Waxaad maqli kartaa macalimiinta oo kahadlaya wax aan isku mid ahayn ama waxbarasho isku mid ah. Waxaan bixinaa isku dar ah labadaba inta lagu jiro barashada fogaanta. Waa tan waxa run ahaantii macnaheedu yahay:
Isynchronous (aan la cayimin waqtiyada): Ardaydu waxay si madax-bannaan u bartaan isla maadada waqtiyo iyo goobo kala duwan
Isku mid ah (waqtiyo cayiman): Ardaydu waxay waxbartaan isla waqti isku mid ah iyagoo isku xirmaya macallinkooda iyo asaaggood
Xulasho Dheeraad ah: Isqorista 100% Barashada Internetka
100% Barashada Internetka
Qoysaska aan ku qanacsaneyn u dirista carruurtooda dugsiga waxay dooran karaan inay iska diiwaangeliyaan 100% Barashada Internetka. Qoysasku waxay u wareegi karaan barashada qadka tooska ah xilli kasta oo sanad dugsiyeedka ah iyagoo la xiriiraya iskuulka ilmahooda.
La xiriir dugsiga ilmahaaga si aad u codsato 100% Barashada Internetka.
Boqolkiiba 100% barashada qadka tooska ah, ardayda waxay wax ku bartaan guryahooda iskudhafka isdhexgalka tooska ah iyo shaqooyinka madaxa banaan.
Jadwal joogto ah oo ku saabsan barashada guriga
La dhaqanka macallimiinta ardayda mid-mid iyo kooxo yar-yar
Isku qas waqtiyada waxbarasho ee jadwalka u ah fasal ahaan (barasho isku mid ah) oo leh barasho toos ah oo toos ah (barashada asynchronous)
Hawlaha asaag-faca-faneed si loo helo taageero bulsho / shucuureed oo dheeri ah
Isgaarsiinta toosan iyo isticmaalka joogtada ah ee barnaamijyada iyo barnaamijyada
Isbedelka Qaabka Barashada
Moodooyinka Xaddidan ee Yar
Moodooyin Xaddidan Oo Badan
Tilmaamayaasha waxay muujinayaan Isbedelka Qaabka
Muujiyeyaasha waxaa ka mid ah:
Qalabka / farsamada iyo manhajka
Hawlaha caafimaadka iyo badbaadada
MDE iyo MDH iyo hagidda degmada
Falanqaynta Saamaynta Kooxda Hoggaanka
Tilmaamayaasha Dib u eegista
Wuxuu qiimeeyaa hawlgallada moodeelka hadda socda iyo jawaab celinta
Aqoonsiga baahiyaha iyo sameynta qorshe
Waxay samaysaa isbeddel moodel iyo talo bixin ah
Go'aanka Guddiga Dugsiga
Wuxuu tixgelinayaa talobixinta Kooxda Hoggaanka
Wuxuu qaataa qaab waxbarasho cusub
Waqtiga Qorshaynta Kala-guurka
Waxay hirgelisaa qaab waxbarasho cusub
Wuxuu sii wadaa la socoshada tilmaamayaasha.
Jadwalka maalmaha kala guurka
Wuxuu la xiriiraa qoysaska
Dib u soco basaska iskuulka
Samee isbeddelo ku habboon shaqaalaha
Isku hagaaji Jadwalka, haddii loo baahdo
Go'aanka lagu gaadhay la-tashiga Waaxda Waxbarashada ee Minnesota, Waaxda Caafimaadka ee Minnesota iyo Gobolka Washington.
Degmadda COVID-19 Lambarada Kiiska
Xaddidaad Yar: Qiimayaashu waa inay ahaadaan kuwo si joogto ah ugu jira dhamaadka hoose ee kaladuwanaanta gobolka la aqoonsaday iyo / ama hoos u socda
Xaddidaad badan: Heerarka oo si aad ah u kordhaya iyo / ama ka dillaaca bulshada
Tilmaame: Awood u leh inuu si sax ah uga shaqeeyo fasallada, fasallada, iyo dugsiyadeenna.
Tilmaame: Awoodda fasalladeenna, fasaladeenna, iyo dugsiyadeennu inay ku shaqeeyaan iyada oo ku saleysan kiisaska ardayda COVID-19
Aaladda / Teknolojiyada & Manhajka
Tilmaame: marin u helka degmada oo dhan ee macalimiinta iyo ardayda ee aaladaha, farsamada, manhajka iyo taageerada
Hawlgallada Caafimaadka & Amniga
Tilmaame: Awood u leh inuu si badbaado leh ugu dhex shaqeeyo borotokoollada iyo hababka caafimaadka, iyo nadaafadda, oo ay ku jiraan nadiifinta, fogeynta jirka iyo bixinta Qalabka Ilaalinta Shakhsiyeed (PPE).
Tilmaame: Awood u siinta adeegyo iskuul ee dhinacyada daryeelka carruurta, nafaqada, iyo gaadiidka.
Qofka Wax Barashada:
Kiisaska la xaqiijiyay ee ardayda iyo shaqaalaha ayaa aad uyar.
Kiis kasta oo la xaqiijiyey waxaa lagu raad raadin karaa isha laga yaabo inuu ka dhasho iyo dhammaan ama inta ugu dhow ee xiriir dhow la aqoonsan karo oo laga saari karo.
Shaqaalaynta waxaa loo qaatay inay kufilan tahay sii wadida waxbarida shaqsi ahaaneed.
Raadinta xiriirku si dhakhso leh ayaa loo dhammaystiri karaa dhammaan ama inta ugu dhow ee xiriiriyana waa la ogeysiin karaa oo looga reebi karaa 24 saacadood gudahood marka lagu wargeliyo kiiska la xaqiijiyay.
Hawlaha manhajka ka baxsan ayaa la qabtay, iyadoo la raacayo inay raacaan tilmaamaha caafimaadka bulshada ee hadda jira.
U guurista Hybrid ama
Qof-Qofka Kadib Barashada Fogaanta
Sug ugu yaraan laba illaa saddex toddobaad laga bilaabo bilawga barashada masaafada kahor intaadan u soo celin arday kasta qof ahaan ama barashada isku dhafan.
La tasho saraakiisha caafimaadka bulshada ee deegaanka, MDH iyo MDE si aad u ogaato in xaaladdu ay ka soo raysay heer ay tahay in barashada isku dhafan ama qof ahaaneed ay habboon tahay.
Qaabka isku dhafan ayaa loo adeegsan karaa buundo si uu si nabadgelyo leh ugu noqdo dib ugu noqoshada qaabkii qof ahaan wax u baran lahaa ee dhammaan ardayda. Tusaale ahaan, iskuulku wuxuu ku shaqeyn karaa isagoo adeegsanaya qaab waxbarasho oo isku dhafan laba xilli oo tijaabooyin ah (28 maalmood) oo si taxaddar leh loola socdo wixii koox ah ee dheeri ah ee kiisaska la xaqiijiyay ee COVID-19 ka hor inta uusan dib ugu laaban qaab waxbarasho oo qof ahaan ah.
Ka-guurista Qofka Gudihiisa ilaa Hybrid
Tirada ardayda iyo shaqaalaha dugsiga ee maqan ama loo diro guriga iyaga oo qaba hargab ama COVID-19 oo la mid ah waxay gaaraysaa ugu yaraan 5% tirada guud ee ardayda iyo shaqaalaha iskuulka hal usbuuc gudihiis.
Bulsho weyn oo dillaacaysa ayaa dhaceysa ama dhowaan dhacday (tusaale, dhacdo weyn oo bulshada ka dhacda ama shaqo-bixiye weyn oo maxalli ah) oo leh awood u leh inuu saameyn ku yeesho shaqaalaha, ardayda iyo qoysaska ay u adeegaan bulshada dugsigu.
Ka guuritaanka Isku-darka iyo Masaafada
Habka barashada masaafada ayaa la tixgelin karaa maalin ama laba haddii kiisaska la xaqiijiyay la ogaado laakiin baafinta xiriirka iyo ogeysiinta dadka xiriirka dhow la leh dugsiga ayaan lagu dhammaystiri karin 24 illaa 36 saacadood gudahood.
Kiisas badan ayaa lagu ogaadaa muddo yar gudahood oo ka dhacda fasallo badan ama hawlo kala duwan, iyo xiriir cad oo u dhexeeya kiisaska si fudud looma aqoonsan karo.
Cudurka faafa ee muhiimka ah ee bulshada ayaa dhacaya ama dhowaan dhacay wuxuuna saameyn ku yeelanayaa shaqsiyaad badan oo ay u adeegeen bulshada iskuulku.
Gudbinta bulshada ee aan la xakameynin ayaa dhaceysa, waxaana jira kiisas badan oo la xaqiijiyay oo ka dhex jira ardayda iyo / ama shaqaalaha.